🥇 ▷ Sida looga soo dejisto fiidiyoowga YouTube-ka wax barnaamij ah oo ku saabsan taleefanka casriga ah ✅
Sida looga soo dejisto fiidiyoowga YouTube-ka wax barnaamij ah oo ku saabsan taleefanka casriga ah
Baro sida looga soo dejisto fiidiyoowga YouTube-ka ee mobilada iyada oo aan la isticmaalin barnaamijyada; Bogga Yout wuxuu awoodaa inuu si toos ah uga soo degsado biraawsarka
Ka soo dejiso fiidiyowyada YouTube Maaha hawl adag – xitaa madal laftiisa ayaa soo saartay YouTube Go. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira qaabab ka dhaqso badan oo fudud oo looga soo dejiyo waxa ka kooban YouTube telefoonkaaga adigoon rakibin wax barnaamij ah.
Casharkan waxaan ku bari doonaa sida loo sameeyo kala soo bax fiidiyowyada YouTube-ka taleefanka gacanta adigoon adeegsan wax codsi ah, si toos ah u isticmaalida biraawsarka. Khayaamada ayaa loo yaqaan Yout, degel kuu ogolaanaya inaad ka soo dejiso fiidiyowyo iyo maqal ah YouTube aad telefoonkaaga ama kiniiniga si aad u fudud.
Yout waa mid ka mid ah goobaha ugu wanaagsan ee laga soo dejiyo fiidiyowyada YouTube-ka walwal la’aan
Tallaabo talaabo talaabo ah inaad ka soo degsato fiidiyowyada YouTube-ka oo aan adeegsan
Soo gal YouTube biraawsar mashiinkaaga casriga ah, (Safari ee iPhone ama Chrome ee Android, tusaale ahaan);
Dooro fiidiyaha aad rabto inaad soo dejiso. Kusoo dejisan kartaa maqal ama muuqaal kaliya taleefankaaga moobiilka;
Hadda beddelo url fiidiyowga adoo ka saaraya “ube“YouTube-ka waa”m“kahor”youtubeKaliya waa helyoutOo riix furaha galitaanka. Urlku waa inuu noqdaa “https://yout.com/watch?…“.
Xullo qaabka wax soo saarka ee la doonayo: ‘MP3’ muusig iyo ‘MP4’ fiidiyaha.
Guji badhanka Rikoorka si aad u sameyso soo dejiso.
Qaab kale oo lagu soo dejiyo fiidiyowyada ayaa ah adiga oo gala Yout.com oo aad dhejiso url vidiyoga aad rabto. Taladan fudud waxaad ku keydin kartaa heesaha iyo fiidiyeyaasha ka YouTube si aad u daawato ama u dhageysato mar dambe.
Siyaabo kale oo looga soo dejiyo fiidiyoowga YouTube-ka
Bedel ku ah Yout waa iyadoo lagu daro laba xaraf “P” ka dib Youtube URLka. Waxaan sameynay waxbarid fiidiyoowga super fudud ah sida loo sameeyo howsha. Fiiri fiidiyaha hoose:
Sidaad laga yaabo inaad ogaato, waxaa jira dhowr siyaabood oo loogu soo dejiyo fiidiyowyo laga soo qaado YouTube. Waxaan horey u barnay sida toos looga soo dejisto Telegram.
Ma jeceshahay barista? Ku dhaaf faallooyinka haddii aad awoodid inaad soo dejiso oo aad siyaabo kale u ogaatid Soo dejiso fiidiyowyo ee YouTube Majiro barnaamij